Anisan'izany Dynamic VC amin'ny Custom Gauges-tsara ho FS2004. Ny isan-karazany Socata TB mbola torontoronina tao teo antenatenan'ireo taona 1970s hisolo ny antitra Morane-Saulnier Rallye. Izy ireo fiaramanidina maivana ho an'ny fialam-boly Travel na raharaham-barotra.
Ny TB-10 Tobago fiaramanidina dia sivily manidina Club, natao ary natao ho an'ny mahitsy sidina. Izany dia Lycoming O-360 amin'ny 180 HP, ny lamasinina ary ny raikitra Mpanosika dity ny fiara, izay mamela ny ambony indrindra hafainganam-pandehan'ny Cruise 127 kts (235 km / h).
Downloads 6 591
Nohavaozina taminy 20-08-2012